Macluumaadka Waalidka / Daryeelaha Dugsiga Oakleigh iyo Xarunta Waxqabadka Sanadaha Hore
Waxaan aaminsanahay in wada shaqeyn lala yeesho qoysaska faa'iidada caruurtooda ay ku dhalinayaan horumar muuqaal leh.
Ka hor inta aanu ilmahaagu bilaabin dugsiga waxaan samaynaa booqasho guri. Taas waxaan u diyaarineynaa taariikhda bilawga iyo habeynta sida cunugaada ugu habboonaan karo iskuulka, oo ay ku jiraan saacadaha dugsiga, qadada, safarka dugsiga iyo xulashada uniform.
Waalidiinta / xannaaneeyayaasha waxaa lagu soo dhaweynayaa dugsiga si ay u taageeraan isdhexgalka shaqaalaha dugsiga. Marka cunugaaga la qabsado, isgaadhsiinta guriga waa telefoon, fariin qoraal ah, buugta maalinlaha ah ee guriga, emails, iyo sidoo kale Tapestry halkaas oo aad ka arki karto sawirada iyo fiidiyowga dhammaan waxbarashada xiisaha leh ee ilmahaagu sameynayo. Waxaa jira warsideeyaal rasmi ah oo emailed ah oo laga heli karo bogga internetka, oo bixiya macluumaad badan.
Hore ee xilliga dayrta, waalidiinta waxaa lagu martiqaadayaa si ay ula kulmaan Kooxda Multidisciplinary ee weyn ee dugsiga.
Waxaan jecel nahay inaan imid oo aan kugula kulanno guriga, maadaama aan arki karno sida ilmahaagu u joogo gurigooda oo uu wada shaqeynayo meelaha ay ka mid yihiin horumarkooda waa inaan wada shaqeynaa. Natiijada booqashadan gurigu waxay u gudbineysaa gudbinta Kooxda Taageerada Qoyska.
Sida aan dib u eegno horumarka
Horumarka iyo guulaha carruurta ayaa maalin kasta la diiwaan geliyaa shaqaale fasal oo badanaa caddaynta horumarka waxaa lagu dhejiyaa diiwaanka Tapestry online, sidaas darteed waxaa lala wadaagi karaa qoysaska.
Dhammaan kuwa cusub ee bilaabay waxay dib u eegayaan horumarkooda lixda bilood ee ugu horreeya ee bilaabista dugsiga. Dhammaan xirfadlayaasha ku lug leh ilmahaaga waxay qori doonaan warbixinta dib u eegista taas oo lala wadaago waalidiinta / daryeelayaasha. Waalidiinta / xannaaneeyayaasha ayaa lagu martiqaaday in ay ka soo qeybgalaan, tabarucdooda waxaa lagu qiimeeyaa si aad ah oo loo arkaa inay yihiin kuwo muhiim ah
Qorshaha Waxbarashada Caafimaadka iyo Daryeelka Ilmahaaga waxaa dib loo eegaa sannadkiiba (ama lix bil walba haddii ay ku jiraan 5) halkaasoo macallimiinta iyo waalidiinta / daryeelayaasha ka wada hadlaan horumarka natiijooyinka barashada.
Tani waxaa kale oo lagu muujin doonaa Barnaamijka Waxbarashada Shakhsi ahaaneed ee ilmahaaga, kaas oo sharraxaya bartilmaameedyada iyo tabaha barista si looga caawiyo ilmahaaga inuu gaaro natiijooyinka barashada.
Ilma kastaa wuxuu leeyahay diiwaanka horumarkooda, oo lagu badbaadiyey server-ka dugsiga, oo ay ku jiraan warbixinnada, Qorshooyinka Waxbarashada Shakhsi ahaaneed, sawir iyo muuqaal. Waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad aragto diiwaanka ilmahaaga.
Lebiska dugsigeena ma ahan khasab laakiin waxaanu kugula talineynaa maadaama ay tahay mid macquul ah oo raaxo leh.
Smith's Schoolwear oo ku yaalla Enfield iyo Potters Bar labadaba waa alaab-qeybiyahayaga. Waxaad u geli kartaa dukaanka ama amar internetka ah, waxayna u gudbin doonaan dugsiga. Waxaad soo dejisan kartaa foomka Order halkan.
Booqo bogga internetka
Qaar ka mid ah waalidiinta / xannaaneeyayaasha waxay keenaan oo ay soo qaadaan carruurtooda maalin kasta, qaarna waxay isticmaalaan Nidaamka gaadiidka ee degmada. Carruurta ayaa la soo ururin karaa oo waxay keenaan bas ku yaal baska, ama mararka qaarkood taksi. Waa gebi ahaanba waalidiinta / daryeelayaasha si ay u go'aamiyaan iyo haddii aan la isticmaalin nidaamkan; Si kastaba ha ahaatee waxaad u baahan tahay inaad buuxiso shuruudaha qaarkood si aad u codsato gargaarka gaadiidka.
Baska ama taksiyada oo dhan waxay leeyihiin darawal iyo wadayaal, kuwaas oo la joogta caruur kasta wakhti kasta waxayna soo qaadaan fariimo, lacag iwm. Gadaashooda iyo calaamadaha u dhexeeya guriga iyo dugsiga.
Waalidiinta / daryeelayaasha waxay u baahan yihiin inay buuxiyaan foomka codsiga ee gargaarka safarka taas oo loo diro Transport.brokering@barnet.gov.uk, ka dibna wuxuu tagaa guddi go'aanka.
Gaadiidka waxaa loo dejiyaa bartamaha, Barnet, oo aan ku hoos jirin maamulka dugsiga. Lambarka xiriirka waa 020 8359 2000.
Dhammaan weydiimaha gaadiidka kale ee carruurta isticmaala nidaamka gaadiidka xaafadda 020 8359 5110.
Codsiyada iyo Macluumaadka Cuntada dugsiga Cuntada Dugsiyada Bilaashka ah iyo Sarkaalka Ardayga Lacagaha Internetka ee Easy